Maleeshiyaadka Al-Shabaab oo dad shacab ah ku xasuuqay Gobolka Sh/hoose | Somali National Television - sntv.so
Home KOONFUR GALBEED Maleeshiyaadka Al-Shabaab oo dad shacab ah ku xasuuqay Gobolka Sh/hoose
Maleeshiyaadka Al-Shabaab oo dad shacab ah ku xasuuqay Gobolka Sh/hoose
Muqdisho (SNTV):- Wararka naga soo gaarayo Gobolka Shabeelaha hoose ayaa sheegaya in maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab weerar ay ku qaadeen inta u dhaxeyso deegaanada Lafoole iyo Carbiska ay ku dileen 9-ruux oo lix ka mid ah yihiin Dumar.
Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Bare ayaa SONNA u sheegay in dadka la dilay ay ka shaqeynayeen Barnaamij isxilqaan oo geedaha laga jarayay wadada hareeraheeda,halkaasina ay ku soo weerareen maleeshiyo gaari wadatay oo xasuuqa u geystay dadkaasi masaakiinta ah.
“ Dad masaakiin ah oo loogu talagalay arrin isxilqaan ah oo annaga aan abaabulnay oo ka shaqeynay iney geedaha ka jaraan wadada ayaa nimanka nabad diidka ah u yimaadeen kuna xasuuqeen, iyagoo halkaasi ku dilay 9-ruux oo lix ka mid ah ay yihiin Dumar,sidoo kale maleeshiyada ayaa horay u watay gabar dhexda ayay ku dileen,” ayuu yiri Guddoomiye Barre.
Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in kan maamul ahaan ay u gurmadeen dadkii waxyeelada soo gaartay,islamarkaana ay ku daba jiraan kooxaha arxan laawayaasha ah ee weerarka soo qaaday.
Mudane Maxamed Ibraahim Barre ayaa ku tilmaamay maleeshiyada Al-Shabaab iney yihiin kuwo ka soo horjeeda horumarka iyo nabada,islamarkaana si joogta ah u beegsadaan shacabka si iskood ah u dhisanaya dalka.
Previous articleHaween ka tirsan Labada Aqalka ee Baarlamaanka Soomaaliya oo tababar ugu ambabaxay Turkiga
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo Dalka dib ugu soo noqday